रेखा थापा फेरि किन पुगिन प्रचण्डको शरणमा ? यस्तो रहेछ कारण — Sanchar Kendra
रेखा थापा फेरि किन पुगिन प्रचण्डको शरणमा ? यस्तो रहेछ कारण
चर्चित नायिका रेखा थापा पुनः प्रचण्डको शरणमा पुगेकी छिन । स्रोतका अनुसार थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अण्डरलाइनमा प्रवेश गर्ने भएकी छिन् ।
अण्डरलाइनका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको परामर्शपछि उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी छोड्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको स्रोतको भनाई छ ।व्यक्तिगत स्वार्थका लै तत्कालिन माओवादी पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी रेखालाई कमल थापाले कुनै महत्व नदिएपछि पशुपति शमशेर राणापार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
माओवादी त्यागेर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेकी रेखा राप्रपा फुटेपछि पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग गएकी हुन्।